custom သွပ်ကာစ် Die China Manufacturer
Ruizhun Precision Metal Co., Ltd. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer Main Mark: Americas , Asia , East Europe , Europe , North Europe , West Europe ထုတ်ကုန်:41% - 50% Cert:ISO/TS16949, ISO14001, ISO9001 ဖေါ်ပြချက်:OEM အော်တိုကာစ် Die,Zamak Houseware Casting Die,Automibile များအတွက် mg အလွိုင်းအစိတ်အပိုင်းများ
Home > ထုတ်ကုန်များ > မဂ္ဂနီစီယမ် Die ကာစ် > mg အလွိုင်းအော်တိုအစိတ်အပိုင်းများကာစ် Die > custom သွပ်ကာစ် Die
မော်တော်ကားသေ၏အရေးအပါဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖုံးမှိုဖြစ်ပါတယ်။ ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အသုံးပြုသောပစ္စည်းများအများအားဖြင့် PA ဆိုပြီးနှင့်ဖန်ထည်ဖိုင်ဘာကောင်းသောဓာတုတည်ငြိမ်မှု, မြင့်မားတဲ့ခိုငျမာနှင့်မြင့်မားသောအပူခုခံအတူ PA66 အားဖြည့်နေကြတယ်, ဒါကြောင့်ကားရဲ့စားသုံးမှုကင်၏ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်အလွန်သင့်လျော်သည် ဖြစ်. , ကျွန်တော်တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီဇိုင်းကိုရပါလိမ့်မယ် ထုတ်ကုန်မြေပုံဒီဇိုင်းအဖွဲ့, အဲဒီနောက်မှိုမှိုဖွငျ့လိမ့်မည်။ အဆိုပါအင်ဂျင်နီယာဌာနထုတ်လုပ်ထွက်သယ်ဆောင်နှင့်အရည်အချင်းပြည့်မီသောထုတ်ကုန်ကိုထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်သည်အထိညှိ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပူးတွဲ mpany တဲ့ professional မှိုဒီဇိုင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့, ဆေးထိုးထုတ်လုပ်မှုများအတွက်မှိုနှစ်ခုကြီးမားသောစက်ရုံထုတ်လုပ်မှုထုတ်ကုန်များနှင့်မြင့်မားသောစံစစ်ဆေးရေးကိရိယာများထုတ်လုပ်ခြင်းတစ်ဆယ်မှိုကုန်ထုတ်အဖွဲ့များဖောက်သည်အတည်ပြုချက်ကိုရှိပါတယ်, ရှစ်ဖြစ်စဉ်များစက်ရုံဧရိယာထဲမှာပြီးစီးခဲ့နေကြတယ်, ဖောက်သည်များနမူနာအတည်ပြု ဖောက်သည်သုတ်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်တင်ပို့မှုအပြီး။ အိမ်သူအိမ်သားကုမ္ပဏီ
သတ်မှတ်ချက်များ (ပစ္စည်း, မျက်နှာပြင်ကုသမှုသည်းခံစိတ်အခြားလိုအပ်ချက်, etc) နှင့်သင်၏ 2D drawings သို့ပေး; သင့်ရဲ့ (MOQ နှင့်နှစ်စဉ်လိုအပ်ချက်) လိုအပ်အရေအတွက် and Logistic လိုအပ်ချက်ဖော်ပြထားခြင်း; 3D ရေးဆွဲအပြည့်အဝထုတ်ကုန်ပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့အများကြီးကြိုဆိုကြသည်။
2.How ရှည်လျားငါ quotation အရနိုင်မလဲ?
ရှည်လျားသော 3.How သင်အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ရန်ကြမည်နည်း